nirmal pradhan(nirmal pradhan) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
काठमाण्डौ । सेयर बजारमा कारोबार रकम १० अर्ब नजिक पुगिरहँदा दैनिकजसो नयाँ नयाँ कीर्तिमानहरु बनिरहेका छन् । पछिल्लो समय दशैँतिहारजस्ता ठूला चाडपर्वहरु पनि बजारको आकार बढ्न बाधक बनेनन् । पछिल्लो समय सेयर बजारमा रेकर्डै रेकर्ड ब्रेक गर्दै २६ खर्ब रुपैयाँ माथि पूँजी बजारको आकार फैलिइसकेको छ । नेप्से परिसूचकले १०९८ को न्यूनतम...
‘सेयर बादशाह’ निर्मल प्रधानको प्रक्षेपण–‘अबको २ वर्षभित्र नेप्से अलटाइम हाईमा’
काठमाण्डौ । लकडाउनपछि खुलेको बजारमा लगानीकर्ताको मनोबल उच्च रहनुमा मौद्रिक नीतिले धेरै हदसम्म सहयोग पुर्यायो। सेयर कर्जाको सीमा ६५ प्रतिशतबाट बढाई ७० प्रतिशत कायम हुनु, सेयरको धितो मूल्याङ्कन गर्दा १८० दिनको औसतमूल्यका साटो १२० दिन कायम हुनु र ब्याजदर समेत सिंगल डिजिटमा ओर्लनुले सेयर लगानीकर्ताको मनोबल ह्वात्तै बढ्यो, जसको प्रभाव...
एनसीसीको मर्जर कमिटीबाट निर्मल प्रधानको राजीनामा
काठमाण्डौ । भारतमा सेयर बादशाह उपनाम परिचित राकेश झुनझुनवाला इन्साइडर ट्रेडिङको घटनामा फसेका छन् । संयोग पनि कस्तो, ठीक यही बेला नेपालका सेयर बादशाह उपनामले चिनिएका निर्मल प्रधान समेत यस्तै विवादमा फसेका छन् । विवादको विषय हो प्रभू बैंक र नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स(एनसीसी) बैंकबीचको संभावित मर्जरको कुरा । बजारमा चलखेल गर्नेहरुलाई...
सेयरबाट कंगाल बनेका निर्मल प्रधान फेरि कसरी बने अर्बपति ? यस्तो छ रोचक सक्सेस स्टोरी
– भक्तराज रसाइली काठमाण्डौ । दिनपछि रात र रातपछि दिन हुुने प्रकृति नियमझैँ व्यक्तिको जीवनमा पनि उत्तारचढाव हुन्छ । यद्यपि जिगर दह्रो बनाई अघि बढ्ने व्यक्ति नै सफल भएका छन् । यस्तै आँट र जोखिम मोलेर नेपाली सेयरबजारमा बादशाहका रुपमा सुपरिचित नाम हो, निर्मल प्रधान । करिब ६५ वर्षअघि तनहुँ को बन्दीपुुरस्थित चण्डेनी टोलमा जन्मेका...
घरजग्गा बेचेर र ऋण लिएर सेयरमा पैसा खन्याउन सेयर बादशाह प्रधानको आह्वान
काठमाण्डौ । नेपालका सेयर बादशाह निर्मल प्रधानले अहिले घरजग्गा बेचेर र बैंकबाट ऋण लिएरै भए पनि सेयर खरिद गर्ने सही र उपयुुक्त समय भएको दाबी गरेका छन् । बिजशालासँगको विशेष अन्तर्वार्तामा प्रधानले हाल सेयर बजार वियरिस ट्रेन्डको न्यूूनतम विन्दूूमा आई कम्पनीहरुको सेयर मूूल्य सस्तो भएकाले सेयर किन्ने सही समय अहिले नै भएको जिकिर गरेका हुुन्...
सेयर बादशाह निर्मल प्रधानको कथा–५ : ‘बैंकहरुले टाई लगाएर डकैती गर्छन् !’
पूँजीबजारको विकासको बिषयमा मेरो धारणा केही फरक छ । हरेक देशको तथा विश्वको पूँजीबजार एउटा निश्चित चक्रबाट गुज्रिन्छ । मेरो विचारमा नेपालमा यस्तो चक्र सात वर्षको छ । तर हाम्रो यो चक्रले पछिल्लो समय एक फन्को पूरा गर्न निकै समय लगायो । कारण, हामीले यही अवधिमा अभूतपूर्वक आर्थिक अवस्था तथा राजनीतिक संकटको चपेटा भोग्यौं । मेरो विचारमा...
म बजारमा मेरो भविष्यको विषयमा आशावादी छु, सधैं थिएँ । जब सेयर मार्केट सन् २००८ बाट क्र्यास हुन सुरु भयो, त्यसपछि अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले संकटको बिषयमा छलफल गर्न एक आपतकालीन बैठक डाक्नुुभयो । उच्च सरकारी अधिकारी, गभर्नर, चिनिएका अर्थशास्त्री, संस्थागत लगानीकर्ता लगायतको त्यहाँ ठूलो जमघट भयो । सो बैठकमा सहभागी संस्थागत...
सेयर बादशाह निर्मल प्रधानको कथा–३ : ‘लगानीकर्ता मारेर यसरी कमाउँछन् बैंकले’
व्यक्तिगत स्तरमा एउटा एलायन्स आवश्यक रहेको हिजोआज महसुुस गरिरहेको छु। यस्तो सम्बन्ध होस्, जहाँ पूर्ण विश्वास रहोस् । यो एलायन्स सधैं पैसाका लागि मात्र नरहोस् । अझ व्यापक अर्थमा भन्ने हो भने हामीले सँगै काम गर्न सकौं, हातमा हात मिलाएर संकटबाट कलात्मक ढंगले निस्किन सकियोस् र आगामी दिनमा आउनसक्ने सबै अप्ठ्याराहरुलाई समेत डटेर सामना गर्न...
सेयर बादशाह निर्मल प्रधानको कथा–२ : ‘४५ वर्षसम्म कमाएको सम्पत्ति ४५ दिनमै स्वाहा !’
नवील बैंकबाट ९ प्रतिशतमा कर्जा लिएको २ महिनापछि नै मलाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ५ देखि ६ प्रतिशतको दरले सेयर कर्जा उपलब्ध गरायो । त्यसबेला वाणिज्य बैंकको सीइओको रुपमा ब्रुस नामका व्यक्ति कार्यरत थिए । त्यसबेला मैले सेयर कर्जाका लागि त्यति धेरै बैंकहरु धाइँन । ब्रुुसजीले मलाई कल गरे र भने–‘निर्मल म तिमीसँग डिल गर्न चाहन्छु। तिमीले...
सेयर बादशाह निर्मल प्रधानको कथा–१ : ‘झण्डै सिद्धिएको थिएँ, यसरी उक्सिएँ’
२०५५ सालमा सेयरमा लगानी गरेका अधिकांश लगानीकर्ताले २०५७–५८ मा ठूलो गिरावटको सामना गर्नुपर्यो, उनीहरुले ठूलो घाटा व्यहोरे । मैले भन्दा धेरै घाटा खानेहरु पनि त्यसबेला थुप्रै थिए । तर, तीमध्ये अधिकांशले आफूलाई सेयर बजारमा पुनस्थापित गर्न सकेनन् । उनीहरुमा फेरि पनि सेयर बजारमा लगानी गर्ने आँट नभएका कारण यस्तो भएको हुनसक्छ । तर, म चाहि...